कृतिम हङ्गामा फैलाएर रातारात शेयर बजार उथलपुथल बनाउन सक्ने शेयर माफियाहरूलाई सरकारले ठिक लगाउने हो कि उनीहरूले भने जस्तै नीति नियम बनाउन गभर्नरलाई दबाब दिने हो ?
देशको कानुन बनाउने कथित विज्ञहरूले श्रीमतीलाई फकाउने ऐन बनाउँछन् । महिलाहरूको नाममा जग्गा पास गरे कर छुट हुने हुनाले भू–माफियाहरूले महिलाहरूको नाममा जग्गा कारोबार गराएको पाउछौं।
उब्जनीयुक्त जग्गा पाकेको बाली नष्ट गरी, जग्गा बाँझो राखी कमिसनको चक्कर जग्गा दलालीहरू लालपुर्जा बेचबिखनलाई सजिलो बनाउन सहकारी, बैंक लगायतका वित्तीय संस्थामा लालपुर्जा धितो राखेर कर्जा कारोबारले उक्साएको देखिन्छ ।
आकासिएको जग्गाको मूल्यवृद्धि माटोको मूल्य बढाए जस्तै नेपाली शेयर बजारमा कृतिम भाउ बढाएर कौडीमा नबिक्ने शेयर बजारमा उकालो लागिरहेको हुन्छ । गिरेको शेयर किनेर त्यसैलाई धितो राखेर शेयर बजार चलायमान गर्ने गिरोहको चलखेल भएको हुन्छ ।
करौडौको शेयर लिने धितो बन्दकी राखेर नेपाली शेयर बजार हाँक्न सक्ने दुईचार जना शेयर दलाल विज्ञहरूले नेपाली शेयर बजार उथलपुथल गरिरहेका छन् ।
कुनै पनि कम्पनीको शेयर बढ्न र घट्नुमा कसको बढी हात हुन्छ ? कम्पनी आफ्नै यथास्थितिमा रहँदा बजारमा शेयर भाउ उतारचढावले कम्पनीमा कृतिम भूकम्प पैदा गरी दिएको छ । अहिले राष्ट्र बैकको निर्देशिकाले शेयर बजारमा अचम्मको यस्तो गिरावट आएको दाबी गरिँदै आएको छ ।
अप्रत्यासी रुपमा मेलम्चीको बाढी जस्तै सोतर पारेर सोझासाझा शेयर लगानीकर्ताहरूलाई तहसनहस बनाउन कृतिम बाढी ल्याउन सक्ने नेपालका औलामा गन्न सक्ने शेयर ब्रोकरहरूको खतरनाक दाउपेचले राष्ट्र बैक गभर्नरको राजीनामा माग भए पछि अर्थमन्त्रीले गभर्नरलाई निकासको लागि निर्देशन दिन बाध्य भए । अर्थमन्त्रीको वक्तव्य शेयर बजार पुन उक्लिने निश्चित भएको छ ।
के शेयर बजार उतारचढाव दलाली ब्रोकरको हातमा हो ? कृतिम हङ्गामा फैलाएर रातारात शेयर बजार उथलपुथल बनाउन सक्ने शेयर माफियाहरूलाई सरकारले ठिक लगाउने हो कि उनीहरूले भने जस्तै नीति नियम बनाउन गभर्नरलाई दबाब दिने हो । अर्थमन्त्री अत्तालिएर शेयर पूँजी बजार दलालीहरूको हातमा कदापि सुम्पनु हुँदैन ।
खेतीयोग्य जमिन भू–माफियाको पन्जामा प्लटिङ गरि आकाश छुने भाउमा जग्गा कारोबार भइरहेको छ । उद्योग धन्दा कलकारखाना, व्यापार व्यवसाय सबै चौपट छन् तर पनि सरकार र भू–माफिया कालोबजारी दलाल ब्रोकर फस्टाउने नीति नियम बनाई रहेकाछन् ।
हल्ला कै भरमा हाम्रो देशमा जहाँ जे पनि हुन सक्ने अहिलेको शेयर बजार स्थिति सबैले महसुस गरिरहेका छन् । यस्तो परिस्थिति सिर्जना गर्ने जिम्मेवार पक्षलाई सरकारले निगरानी गरिनु आवश्यक छ ।
खाली कर उठाउने रणनीतिमा मात्र सरकारको ध्यान गएको छ । जनताको लगानी सुनिश्चित हुने कानुन र नियमहरूमा ध्यान पु¥याउन सकेको देखिँदैन । जग्गा कारोबार , शेयर कारोबार ,भन्सार आयात र निर्यातमा व्यापक राजस्व असुलेर मस्त रहने अर्थमन्त्री ज्यु नेपाली उद्योग कलकारखाना व्यापार नीतिमा व्यवसायी उद्यमीहरूको हकहितको विषयमा ध्यान पु¥याउन सकेको भए आर्थिक उन्नतिमा हाम्रो देश सक्षम हुने थियो ।
आज देश कोरोनाको कारणले लकडाउनमा ठप्प भएको अवस्थामा नेपाली जनताहरूको आयआर्जन नभएको बेला सरकारले राहतको अनुभूति जनतालाई दिलाउन सकेको छैन । आफ्नो देशमा रोजगार पाउन नसकेर विदेशमा रहेका नेपालीहरूले लगानी गर्ने शेयर बजार अप्रत्यासी आँधी बेहरी ल्याउने गर्दछन् । त्यसरी नै घर जग्गा कारोबारमा पनि बाढी पहिरोको भेल नबगाउला भन्ने छैन ।
आज विदेशमा रहने नेपालीहरूले आफूले कमाएको रकम लगानी गर्ने सहज वातावरण बनाई दिनुपर्ने थियो । आफ्नो घर जग्गा बन्धकी राखेर वा बेचेर विदेश गएकाहरूले विदेशी भूमिमा धेरै वर्ष दुख कष्ट गर्दा आफ्नै पुरानो जग्गा फिर्ता किन्न नसक्ने स्थिति देखापर्न थालेको छ ।
विदेशमा पसिना बगाएर , स्वदेशमा जागिर खाएर , व्यापारिक व्यवसाय जे गरे पनि सोधा सिधाले साधारण जीवन पनि बाँच्न कठिन भएको छ । जे जहाँ पनि अनैकताको वर्चस्व बढ्न थालेको देखिन्छ । नेपाली जनतालाई काम गरि खाने शान्ति क्षेत्र नेपालको आभास गराई देऊ सरकार ।